Egwuregwu egwuregwu anọ kachasị mma maka gam akporo | Gam akporosis
Edere Ferreno | | Egwuregwu gam akporo, Nkuzi
Nhọrọ nke egwuregwu anyị na-ahụ na Storelọ Ahịa Play buru ibu taa. E nwere egwuregwu maka ihe niile masịrị gị na gam akporo. Gendị ihe na-amasị m bụ egwuregwu egwuregwu. Ndị ọrụ nwere ike idozi ihe omimi ma ọ bụ mpụ. Ya mere, n'okpuru anyị ga-ahapụ gị nhọrọ na egwuregwu kachasị mma nke ụdị nke anyị dị ugbu a.
N'ụzọ dị otú a, ndị chọrọ inwe a egwuregwu nyocha n'otu ekwentị ekwentị gị, ị ga-enwe ike ịchọta aha ọhụrụ n'etiti nhọrọ ndị a. O doro anya na o nwere nke na-adọrọ uche gị. Ha niile dị na Storelọ Ahịa Play, ya mere ọ ga-adịrị gị mfe ijide ha na ekwentị gị.
1 Prọfesọ Layton na Mysterious Village
2 Isnye bụ Onye Na-egbu Ihe? Nwunye m
3 Ihe omimi nke Scooby-Doo
4 NCIS: Mpụ Zoro Ezo
Prọfesọ Layton na Mysterious Village
Anyị na-amalite na saga a maara nke ọma, nke na nke a na-agụ Prọfesọ Layton n'onwe ya. N'okwu a, anyị ga - achọpụta akụ ama ama nke obodo Saint-Mystère. Maka nke a, anyị ga - ahụ ọtụtụ egwu na ebe dị iche iche. Ma na villa n'onwe ya na mpaghara ndi ozo. Kindsdị njirimara niile anyị ga-edozi, yana mgbagwoju anya na ihe omimi ndị ọzọ. Ihe isi ike ya na-agbanwe, ọ bụ ezie na ọ na-arịwanye elu ka anyị na-aga n’ihu. A akụkọ na nko, ma nke ahụ abụghị kwa mgbagwoju anya. Na mgbakwunye, ọ nwere eserese dị mma.
Ibudata egwuregwu a maka gam akporo nwere ọnụahịa nke euro 10,99, nke bụ n'ezie ihe dị oke ọnụ. Enweghị azụta ma ọ bụ mgbasa ozi n'ime ya. Ọ bụ egwuregwu dị mma, nwere oke mma, mana ọnụ ahịa ya nwere ike ime ka ọtụtụ mmadụ ghara inye ya ohere.
Layton: Obodo omimi nke HD
Isnye bụ Onye Na-egbu Ihe? Nwunye m
Aha egwuregwu a na-enye anyị ihe ngosi doro anya banyere ihe anyị ga-eme n'ime ya. E meela igbu ọchụ, na ọtụtụ ndị nwere ike igbu ọchụ. Ya mere, anyị ga-enyocha n'etiti ndị ahụ na-enyo enyo, chịkọta ihe ngosi ma si otú a nwee ike ikpebi olee onye n'ime ndị a kpatara ogbugbu ahụ. Ọrụ nke egwuregwu a enweghị ọtụtụ ihe omimi, mana ọ na-atọ ụtọ nke ukwuu iji bulie ma nweta ihe ngosi, nke ga-eme ka anyị bịarukwuo nso na mkpebi nke mpụ ahụ. Anyị ga-enwerịrị nghọta anyị niile.
Nbudata egwuregwu a maka gam akporo n'efu. Ọ bụ ezie na n'ime ya anyị na-ahụ mgbasa ozi. Dika odi, ha adighi kwa agha.
Ihe omimi nke Scooby-Doo
Egwuregwu nke jikọtara akụkụ onye na-achọpụta ihe na agwa ama ama na ọchị dị ka Scooby-Doo. Anyị ga-edozi ihe omimi dị iche iche na egwuregwu ahụ, dịka ndị a na-ahụkarị na usoro nke usoro ahụ ma ọ bụ na fim ahụ. Ọ bụ ezigbo ngwakọta nke ụdị, ebe ọ bụ na Na mgbakwunye na ịnyocha ma dozie ihe omimi, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ na ọkụ. Ihe na-eme ka anyị na-ekpori ndụ oge niile mgbe anyị na-egwu egwu. Graphics bụ mma. Ọ dị mfe karịa egwuregwu ndị ọzọ gbasara nsogbu, mana ọ dị mma iji oge ole na ole na-atụrụ ndụ.
Nbudata egwuregwu a maka gam akporo n'efu. Na mgbakwunye, anyị enweghị ịzụta ma ọ bụ mgbasa ozi ụdị ọ bụla n'ime ya.
Developer: Warner Bros. International ụlọ ọrụ
NCIS: Mpụ Zoro Ezo
Igwe onyonyo a ma ama, nke dị n'ikuku ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge 20, nwere egwuregwu nke ya maka ekwentị gam akporo. Anyị ga-aga idozi mpụ, dịka n'usoro isiokwu ahụ, ya na ndị otu nwere Gibbs n'isi. Anyị ga-agabiga usoro nyocha niile iji nweta nsonaazụ a na-atụ anya ma jide onye mere mpụ ahụ. Enwere akara, anyị kwesịrị ịjụ ndị akaebe, were ihe atụ, nyochaa ebe mpụ ahụ, wdg.. All nzọụkwụ anyị ga-agbaso n'ọnọdụ ndị a.
Nbudata egwuregwu a maka gam akporo n'efu. Ọ bụ ezie na anyị na-ahụ ịzụrụ na mgbasa ozi n'ime ya. Ihe ndị a abụghị ịzụta iwu iji nwee ike ịga n'ihu na egwuregwu ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Egwuregwu kachasị mma maka gam akporo